News 18 Nepal || सपनामा सुन्दर युवती देख्दा कस्ताे फल प्राप्त हुन्छ ? जानी राखौं
काठमाडौं । हामीले देख्ने सपनाहरुका शुभ र अशुभ फलहरु प्राप्त हुने गरेका छन् । कतिपय यस्ता सपना हुन्छन् जस्ले हाम्रो जीवनको सफलता र सुख प्राप्त तर्फ अग्रसर गराउंदछ । त्यही यत्स सपना हुन्छन् जसले जीवनमा ठूलो संकट नै निम्त्याउंन सक्दछ ।
आखिर कस्ता सपनाले कस्ता फल प्राप्त हुन्छन त ? हामी यहाँ कस्ता युवतीहरु सपनामा देख्दा कस्तो फल प्राप्ती हुन्छ त्यही बिषयमा कुरा गरी रहेका छौं । यदि सपनामा गोरी सुन्दर स्त्रीले अंगालो हालेको देखियो भने तपाईलाई चाँडै नै धनप्राप्ति हुनेछ । सपनामा अप्सराहरूको दर्शन भयो भने अतुल्य धन पाइन्छ ।
बैदिक शास्त्र भन्छ, यदि सपनामा अप्सराको दर्शन प्राप्त भयो भने भिखारी पनि मालामाल हुन्छन् । सपनामा प्रेमिकासँग घुम्न गएको देखियो भने त्यही प्रेमिकासँग पछि दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन्छ । सपनामा कुनै महिला देख्नुभयो भने त्यसको विशेष अर्थ लाग्छ ।
कुनै पुरुषले सपनामा महिलालाई चुम्बन गर्यो वा संसर्ग गर्यो भने उसले अचानक धेरै धन पाउने सम्भावना हुन्छ । सपनामा बुर्का लगाइएको महिला देखियो भने मित्रबाट विश्वासघात हुन्छ । सपनामा तास खेलिरहेकी महिला देखियो भने सम्मान प्राप्ति हुन्छ र धनसम्पत्ति पनि बढ्छ ।